Dastabej » किन मनाईन्छ बिश्वकर्मा पूजा ?
किन मनाईन्छ बिश्वकर्मा पूजा ? – Dastabej
किन मनाईन्छ बिश्वकर्मा पूजा ?
नेपालगन्ज । असोज महिनाको १ गते अर्थात् कन्या संक्रान्तिलाई निर्माण तथा प्रविधि उत्पादन तथा अध्ययनका विद्वान श्री विश्वकर्मा बाबाको पूजाका रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ । आजको दिन वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू यिनै विश्वकर्मा बाबाको सम्मानमा पूजाआजा गर्ने गर्छन् ।
१ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०६:५५ प्रकाशित